Shanghai Bao Feng Machining Manufacturing Co., Ltd.
Niorina tamin'ny 2001 ny SPL ary orinasa iray an'ny Lianhe Chemical Technology Co., Ltd. (kaody fizarana 002250). Ny SPL dia miorina amin'ny valan-javaboary tanànan'ny tanàna Baoshan any Shanghai, miaraka amin'ny rafitra fifandraisana sy fitaterana tena tsara, akaikin'ny manodidina sy ny arabe ivelany an'ny sh Shanghai, ary 13km miala ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Hongqiao, ary 12km miala ny Station Railway Shanghai. Ny orinasa SPL dia miorina amin'ny faritra 27000m2, izay misy ny velarantanin'ny trano 18000m lehibe2. Ny orinasa dia voamarina ISO 9001: 2015 ary manaraka tsara ny torolàlana napetraka eo ambanin'ity rafitra fitantanana kalitao ity.
SPL dia manokana amin'ny tetikasa fampandrosoana, famolavolana, varotra ary turnkey ho an'ny fitaovana fifanakalozana hafanana. Ny vokatray lehibe indrindra dia ny condenser Evaporative, Air cooler, Evaporative air cooler, Closed circuit cool tower, Refrigerating auxiliary fitaovana, pressure vessel, ice storage cooler system of Grade D1 and D2. Misy mihoatra ny 30 ny andiam-bokatra sy 500 karazana vokatra izay be mpampiasa amin'ny Air Compressor Cooling, Metallurgical furnace Cooling, Vacuum furnace Cooling, Melting furnace Cooling, HVAC Cooling, Oil and Other Process Fluid Cooling, Ground Source Heat Pump System Cooling, Data Ivotoerana, mpanova matetika, milina tsindrona, tsipika fanontana, drawbenches, lafaoro polycrystalline, sns. Ho an'ny sakafo, labiera, fivarotam-panafody, simika, photovoltaic, indostrian'ny fandrendrika vy sns.
Ny fitaovana fanamboarana fototra dia ampidirina mivantana avy any Alemana.
Manana injeniera zokiolona 6 izahay, injeniera 17, injeniera mpanampy 24 ao amin'ny ivon'ny R&D, dokotera na profesora avy ao amin'ny University of Science and Technology of China avokoa izy rehetra.
3.1 Fitaovana fototra.
Rindrin'ny Super Galum
Ny akorandriaka dia vita amin'ny takelaka Aluzinc faran'izay mahery miaraka amin'ny fanoherana ny harafesina matanjaka ary maharitra 3-6 heny noho ny an'ny takelaka Aluzinc mahazatra. Ireo takelaka dia manana fanoherana hafanana mahery, ary endrika bika.
55% Aluminium—— Tombony: fanoherana ny hafanana, androm-piainana lava
Zinc 43,4 %—- Tombony: fanoherana tasy
Silika 1,6% —— Tombony: fanoherana ny hafanana
Super Galum no marika marika ho an'ny 55% vy-zinc mifono vy. Ny Super Galum dia hafanana be ary tsy mahazaka harafesina, manambatra ny fananan'ny aliminioma izay manome faharetana mitombo, fanoherana hafanana tena tsara, formability, ary ireo an'ny zinc izay manome fanoherana hafanana avo sy fiarovana ara-pahasalamana tsara. Super Galum dia telo ka hatramin'ny enina mes tsy azo harafesina kokoa noho ny vy vy zinc lafo.
Ny coil condensing manokana an'ny SPL dia amboarina ao amin'ny SPL avy amin'ny fantsona vy avo lenta manaraka ny fomba fifehezana kalitao faran'izay mafy. Ny fizaran-tany tsirairay dia zahana mba hanomezana toky ny kalitaon'ny fitaovana avo indrindra.
Ny coil SPL rehetra dia niforona tao anaty singa iray mitohy amin'ny fampiasana tsipika famokarana coil automatique miavaka, io fanao io dia mametra ny slag welding, mampitombo ny fahombiazan'ny famokarana ary ny fotoana itarihan'ny orinasa.
Ny coil dia voasedra hydrostatically atleast in-3 mandritra ny fizotry ny famokarana amin'ny tsindry 2.5MPa hahazoana antoka fa afaka mamoaka azy ireo.
Miaro ny coil amin'ny harafesina, ny coil dia apetraka ao anaty vatan'ny vy mavesatra ary avy eo atsofoka ao anaty zinc an-idina (milentika mafana) ao anaty fefy 427 ny vovonana iray manontolo.oC, ny fantsona dia atsangana amin'ny làlan'ny fikorianan'ny tsiranoka mba hanomezana lakan-drano tsara.
Ny coil standard an'ny SPL dia manome fahombiazana mahomby indrindra amin'ny famindrana hafanana miaraka amin'ny teknolojia coil ary fenoy ny fitambarana mba hisorohana ny toerana maina sy ny loto miforona amin'ny coil.
Singa amboarina azo antoka
Ny kabinetran'ny BTC dia mampiasa bolt dacromet hifandray, tonga lafatra kokoa ny inoam-bidy noho ny tadim-poitra mahazatra, mandritra izany fotoana izany dia manome toky izy fa maharitra mandritra ny fotoana maharitra ny tranon'ny cooler.
Ny mpankafy axial an'ny tsipika SPL dia mampiasa kofehy fibre karbaona manokana mandroso mpanaingo miolaka, ity dia manome, habetsahan'ny rivotra avo, tabataba ambany, fampisehoana tonga lafatra miaraka amin'ny fahombiazana avo.
Soso-tsifotra misy pataloha
Ny fantsom-panafody maimaim-poana SPL'S fantsom-panafody maimaim-poana dia mijanona tsy misy clog raha manome fizarana rano tsy tapaka sy azo antoka ho an'ny mari-pahaizana azo refesina amin'ny alàlan'ny fepetra miasa rehetra. Ankoatr'izay, ny fonosana dia napetraka ao amin'ny harafesina - fantsom-pizarana rano maimaim-poana ary misy satroka farany misy kofehy.
Miaraka, ireo singa ireo dia mitambatra mba hanomezana fandrakofana coil tsy mitovy sy fisorohana mizana, izay mahatonga azy ireo hanao ny tsara indrindra amin'ny rafitra fizarana rano tsy misy korontana, tsy misy fikojakojana.
Paompy mihodina rano
Fahombiazana avo lenta Siemens mitondra motera, miaraka amin'ny fikorianan'ny besinimaro sy ny tabataba ambany. Izy io dia mampiasa tombo-kase mekanika tsy voafetra voafetra, tsy misy famoahana ary androm-piainana lava.
Fanadiovana elektronika De-scaling
Ny mpanadio de-scaling elektronika dia manome 98% fitomboan'ny fahombiazan'ny fihenan'ny haavon'ny rano ary mihoatra ny 95% ny fihanaky ny sterilisation & ny ahidrano noho ny haitao elektronika avo lenta. Natao indrindra ho an'ny tilikambo fihenan'ny tadivavarana mihidy sy ireo condenser evaporative misy fanjifana herinaratra ambany.
Famonoana karazana tantely tantely vita paty
Ny famolavolana SPL® fenoy ampiasaina amin'ny tsipika condenser evaporative sy ny tilikambo fihenan-tsasatra dia natao manokana hampidirana ny fifangaroan'ny rivotra sy ny rano ho an'ny famindrana hafanana ambony. Ny toro-hevitra manokana momba ny tatatra dia mamela ny famoahana rano be tsy misy fidinan'ny tsindry be loatra. Ny famenoana dia namboarina tamin'ny polyvinyl chloride inert (PVC). Tsy ho lo na ho simba izy io ary atambatra mba hahazaka ny maripanan'ny rano 54.4ºC. Noho ny fomba tokana an'ny tantely - baomba izay ifamatoran'ny ravin-tsolika mifamatotra, ary ny fanohanana farany ny fizarana famenoana, ny fahamendrehan'ny famenoana dia fenoina, mahatonga ny fenitra azo ampiasaina ho sehatra miasa. Ny fenitra voafantina ho an'ny Condenser sy Cooling Tower dia manana toetra tsara mahatohitra afo.
Ny famonoana karazana tantely ao anaty tantely sy ny famolavolana rivotra fohy marindrano dia afaka miantoka ny fidiran'ny hafanana avy amin'ny rivotra mangatsiaka avy hatrany.
Fampiroboroboana ny Air Inlet Louver
Miaraka amin'ny rafitra roa mahery kokoa, ny rano mitete dia voasambotra amin'ny làlan-tsambo mankao anatiny, mampihena ny olana misosa. Ny endriny louver tokana an'ny SPL ho an'ny tsipika SPL rehetra an'ny N dia manidy tanteraka ny faritry ny fantsona. Voasakana avy amin'ny rano ao anaty ny condenser sy ny tilikambo mangatsiaka ny tara-masoandro mivantana, amin'izay hampihena ny mety ho fananganana ahidrano. Mihena be ny vidin'ny fitsaboana sy fikolokoloana rano. Na dia misy tsara aza ny rano miverimberina sy ny fanakanana ny tara-masoandro, ny endrika mavitrika dia misy fidinan'ny tsindry ambany. Ny fihenan'ny tsindry ambany dia miteraka fihenan'ny angovo ambany, izay mampihena ny vidin'ny fandriam-pahalemana.
Vasin-tsolampy misy fanadiovana mety
Ny lemaka ambany amin'ny fantson-drano amin'ny fantson-drano dia afaka manadio ny maloto sy ny fahalotoana
Advanced Eliptical Coil Technology
Ireo condenser vaovao manaparitaka farany vaovao dia mampiasa famolavolana coil elliptical vita patanty izay manome toky fa ny fahombiazan'ny asa bebe kokoa aza. Ny famolavolana fantsom-bozaka elliptical dia mamela ny elanelan'ny fantsom-pifandraisana akaiky kokoa, izay miteraka faritra ambonimbony kokoa isaky ny faritra planina noho ny volavola boribory boribory boribory. Ankoatr'izay, ny endrika elliptika revolisionera dia mampiasa teknolojia coil fin eliptika ary manana fanoherana ambany kokoa amin'ny airflow noho ny volavola coil finned mahazatra. Io dia mamela ny famoahana rano bebe kokoa, mahatonga ny coil elliptical vaovao ho famolavolana coil mahomby indrindra hita eny an-tsena.
BTC Series-Karazan-tsiranoka vaovao mifantsitsitra vita amin'ny rindrina
Ny lavaka fantsakana vaovao eo amin'ny zorony miondrika amin'ny rindrina dia natao handrotsahana ny ranon'orana, hampihenana ny loaka sy ny harafesin'ny valiha, tsy hisy vokany firy amin'ny tombo-kase sy ny bika aman'endriny ary hanitatra ny androm-piainan'ny serivisy.
Drafitra misy fitoerana ho an'ny vidin'ny fandefasana ambany
Ny vokatra SPL Series dia natao halefa ao anaty kit izay mifanaraka amin'ny kaontenera.
Ny varavarana fidirana lehibe sy ny efitrano anatiny malala-tanana dia manao fanadinana sy fanamboarana mety. Ny tohatra mitanjozotra any ivelany dia mora miakatra sy midina.
Ny akoho baolina sy ny sivana an'ny SPL Series dia azo dinihina sy amboarina nefa tsy atsaharo ny fiasan'ny condenser satria mitovy ny lalana amin'ny fikorianan'ny rivotra sy ny fikorianan'ny rano. Ireo nozera sy coil dia azo dinihina sy amboarina mandritra ny fandidiana.
Nanangana sehatra fitsapana tilikambo fihenan-tsakafo ao an-trano izahay, miaraka amina karazana fantsona samihafa any Shanghai. Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny University of East China University of Science and Technology, izahay dia miara-miasa amin'ny fampiharana ny teôria siantifika mandroso indrindra na vokatra anatiny sy fanondranana an'ny orinasa. Manohy mitarika ny fironana amin'ny tsena isika amin'ny alàlan'ny fitaovana tsara indrindra, ny teknolojia farany. Nandray anjara tamin'ny fenitra enina drafitra Shanghai eto an-toerana sy fenitra indostrialy iray izahay.
Manangana karazana sehatr'asa fitsapana samihafa ho an'ny condenser evaporative izahay, hiantohana ny kalitao avo lenta sy ny fahombiazan'ny vokatra mivoaka.
Izahay dia manolo-tena hanangana orinasa kilasy voalohany, hanao vokatra kilasy voalohany. CTI (Cooling Technology Institute) avy any Etazonia dia nanamarina ny trano fijanonantsika Cooling Towers isan-taona, ny fahombiazan'ny vokatra dia nahatonga anay hanana toerana ambony ao Shina.
Nahomby ny famolavolana ny cooler fitambarana setra voalohany ho an'ny tetik'asa poly-silicon izay miorina amin'ny faritra maina mora iharan'ny fasika any Shina izay manome tahiry rano sy angovo. Ny firafitry ny fidirana amin'ny rivotra natao manokana dia manakana ny fasika sy ny vovoka tsy hiditra amin'ny fitaovana misy rivotra, ary mampihena be ny fatiantoka rano. Mpankafy fiovam-po matetika, mahatratra ny fifehezana ny mari-pana tsara, ary ny fitsitsiana angovo bebe kokoa. Rafitra fanamafisana nohamafisina, fampiasam-bola indray mandeha, fiainana lava, rafitra fizarana rano mihidy miaraka amin'ny fitaovana siantifika, tsara kokoa amin'ny fitsitsiana rano.
Tetikasa fanalefahana etona etona entona China Fist ao CNOOC
Tetikasa famokarana solika diôzida famolavolana China Fist any West Mining
Tetikasa fambolena condiment acetate China Fist China ao amin'ny Xinfu Bio.
Niorina tamin'ny 2001 ny SPL ary namokatra mpivarotra hafanana nandritra ny 20 taona. Manana ny fikarohana ao an-trano sy ny fahafaha-mivoatra izahay, ary koa ny ambaratonga mandroso eo amin'ny sehatry ny indostria, ny fitsaboana ny hafanana, ny milina, ny fizahana ara-batana sy simika, ny fahaizana mifehy ny kalitao.
2002 condenser evaporative mahomby voalohany
Vondron'olona iray tena mahay dia natokana ho an'ny fitaovana fifanakalozana hafanana simika avo lenta miaraka amin'ny traikefa an-taonany maro momba ny R&D sy ny famokarana. Ahitana injeniera zokiolona 6, injeniera 17, injeniera mpanampy 24 ary teknisiana 60 ny ekipa. Manana orinasa marobe fanamboarana mandroso sy fitaovana fanaraha-maso avy any an-trano sy any ambony ny orinasa, toy ny foibe fanodinana mandeha ho azy, milina X-Ray, milina ultrasonika, milina fitiliana manaitra, milina fitsapana fihenjanana. Ny toerana misy ny indostrian'ny SPL dia azo antoka amin'ny alàlan'ny fampidirana tanteraka ny haitao farany ho an'ny ao an-trano sy any ambony, maka ny tombony ary ny teknika ary ny fahaizana milina tsara.
Ny marika manerantany dia tohanan'ny kolotsaina orinasa. Fantatray tsara fa ny kolontsain'ny orinasany dia azo alaina amin'ny alàlan'ny Impact, Infiltration ary Integration ihany. Ny fampandrosoana ny vondrona misy anay dia notohanan'ny soatoaviny lehibe tao anatin'izay taona lasa -------Fahamarinana, fanavaozana, andraikitra, fiaraha-miasa.
Ny vondrona misy anay dia manaraka hatrany ny fitsipika, mifantoka amin'ny olona, ​​fitantanana tsy fivadihana,
kalitao faran'izay tsara, laza malaza Premium lasa fahamarinana
ny loharanon'ny loharanon'ny fifaninanana misy eo amin'ny vondrona misy anay.
Ny fanavaozana dia mitarika amin'ny fampandrosoana, izay mitarika fitomboan'ny tanjaka,
Ny fiaraha-miasa no loharanon'ny fampandrosoana
Miezaka izahay mba hanangana vondrona fiaraha-miasa
Ny fiaraha-miasa mba hamoronana toe-javatra mandresy dia heverina ho tanjona lehibe indrindra amin'ny fampandrosoana ny orinasa
Ny vondrona misy anay dia nahavita nahatratra ny fampidirana loharanon-karena, ny fifanatonana,
avelao ny olona matihanina hilalao feno ny mahaizy azy
ASA MAHATELO IZAY NATAON'NY ekipanay HO AN'NY MPIANATRA ISIKA!
Mifantoha amin'ny fampandrosoana, famolavolana, famokarana, varotra ary serivisy ho an'ny tetik'asa famindrana hafanana;
Mametraha fifandraisana akaiky amin'ny fiaraha-miasa amin'i Shanghai Jiao Tong University, University of Technology China South, University Ocean Ocean, University of Science and Technology, China University, Harbin University of Commerce,
Manana patanty famoronana nasionaly iray sy patanty modely ilaina 22;
Meteza ho fotodrafitrasa sy fikarohana eo amin'ny anjerimanontolon'ny teknolojia any South China amin'ny fampivoarana ny hafanana sy ny fitsitsiana angovo;
Mandraisa anjara amin'ny famolavolana ny fenitra 6 any Shanghai toy ny:
✔ "Ny fantsom-panafody mampihena angovo dia manome lanja ny isa sy ny laharana fahombiazan'ny angovo"
✔ "Fanjifana herinaratra fitehirizana mangatsiaka isaky ny singa iray sanda voafetra sy ny laharan'ny fahombiazan'ny angovo"
✔ "Rafitra fenitra fitantanana angovo orinasa"
✔ "fenitra fiarovana ny famokarana mangatsiaka amoniaka"
✔ "fenitra mahomby amin'ny angovo mikatona mihidy"
✔ "Ny fomban'ny famolavolana pultrusion ary ny fahombiazan'ny angovo famatsiam-bola ary ny tombam-bidin'ny famerenana angovo"
Mandraisa anjara amin'ny fenitra "Fomba entina miorina amin'ny rivotra lavitra ho an'ny rivotra" mekanika fitiliana evanjelika "ho an'ny Komity Teknika ho an'ny fanamafisam-peo.
✔ Manana ekipa injenieran'ny R&D tena tsara ary manamboatra mpiasa mahay manana traikefa an-taonany maro.
✔ Manana milina famokarana mandroso sy fanandramana toy ny ivon-tariby mandeha ho azy, milina fitiliana fiatraikany sns.
✔ Tompony ny tsipika famokarana fantsona mandeha ho azy mandroso indrindra ao an-toerana, ary ny tsipika fanenjana fantsona.
✔ Manana lisansa fanamboarana sy fanamboarana D1, D2 anao manokana.
✔ Taratasy fanamarinana rafitra fitantanana ISO9001-2015.
✔ Mandalo fanamarinana CTI.
✔ Faham-pahefana fametrahana tsindry GC2 anao manokana.
✔ Mamolavola rindrambaiko fandinihana condenser evaporative miaraka amin'ny Shanghai Ocean University, ary homena mari-pankasitrahana fisoratana anarana lozisialy ho an'ny NCAC.
✔ Orinasa fiompiana goavana amin'ny siansa sy ny teknolojia any Shanghai.
✔ Orinasa teknolojia avo lenta any Shanghai.
✔ Famoronana siansa sy teknolojia any Shanghai - loka faharoa.
✔ Fandrosoana siansa sy teknolojia any Shanghai- Loka fahatelo.
✔ Kilasy AAA momba ny fifanarahana Shanghai.
✔ Mpikambana ao amin'ny Association Conservation Energy Shanghai.
✔ Mpikambana ao amin'ny Fikambanana orinasa sy siansa sy teknolojia any Shanghai.
✔ Mpikambana ao amin'ny Fikambanana Shanghai ho an'ny fampiroboroboana ny zava-bita siansa sy teknolojia.
✔ Ny tranga voalohany tao amin'ny tetikasa Shanghai Gaoqiao Sinopec catalytic cracking crack;
✔ Ny tranga voalohany an'ny firenena an'ny CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) tetik'asa fanamafisana etona etona;
✔ Tetikasa fanodinana solifara dioxide solifara WESTERN MINING voalohany tao amin'ny firenena;
✔ Ny tranga voalohany misy ny firenena ny tetikasa XIN FU biolojika etil acetate mangatsiaka etona;
FAMPANDROSOANA FAMPANDROSOANA FAMPANDROSOANA
Ny fahalalana bebe kokoa momba anay, dia hanampy anao bebe kokoa
- Fanohanana sy fanoloran-kevitra manohana traikefa teknika mangatsiaka 20 taona.
- Fanombanana fitaovana fanofanana teknika;
- Fametrahana sy fanesorana ny troubleshoot;
- Fanavaozana sy fanatsarana ny fikojakojana;